Maamulka Gobolka Banaadir oo olole nadaafadeed ka sameeyey Degmooyinka Caasimadda+Sawirro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maamulka Gobolka Banaadir oo olole nadaafadeed ka sameeyey Degmooyinka Caasimadda+Sawirro
Maamulka Gobolka Banaadir oo olole nadaafadeed ka sameeyey Degmooyinka Caasimadda+Sawirro
Ololahan ayaa noqonaya mid dhamaan bulshada ka qaybaheeda kala duwani ka qayb qaadanayso. Waxana lagu nadiifiyey jidad muhiim ah oo ku yaalla halbowlaha magaalada Muqdisho .
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa boggaadiyey barnaamijka Is-Xilqaam ee dalka dib u dhiskiisa looga qayb qaadanayo laguna nadiifinayo Caasumada si bilicdeedii dib ugu soo noqoto .
Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in nadaafaddu ay ka bilaabato guriga iyo deegaanka uu qof walba ku nool yahay, maamulkiisuna uu mudnaanta siinayo ilaalinta bilicda iyo faya dhowrka Caasimadda. Isagoo ugu baaqay shacabka ku nool Muqdisho in ay u istaagaan horumarinta dalkooda. Maadaama nadaafadu tahay mid waajib ku ah muwaadin kasta diinta islaamkuna na farayso.